Addunyaan Akka Waan Vaayiresiin Koronaa Dhumatee Fakkeessuu Hin Qabu: Hoogganaa Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAddunyaan Akka Waan Vaayiresiin Koronaa Dhumatee Fakkeessuu Hin Qabu: Hoogganaa Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa
Addunyaan Akka Waan Vaayiresiin Koronaa Dhumatee Fakkeessuu Hin Qabu: Hoogganaa Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—Biyyi kamiyyuu waan akka weerarri koronaa dhumateetti fakkeessuu hin qabu jechuu dhaan hoogganaan jarmayaa fayyaa addunyaa akeekkachiisan.
Kaleessa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kan kennan Dr. Teedroos Ahaanoom akka jedhaitti biyyoonni ennaa weerara COVID-9 dinagdee isaanii mara banaa taasisuu barbaadu taanaan, faca’ina vaayiresii kanaa xiqqeessanii lubbuu oolchuu ilaalchisee sirriitti itti yaaduu qabu jedhan.
Biyyonni vaayiresii kana akkaan to’atan akkasuma dinagdee itti dabalaa banuu danda’u jedan Teedroos. Utuu hin to’atin dinagdee banuu jechuun balaaf daandii saaquu dha jedhan.
Biyyoonni, magaalaalee fi namni martinuu vaayiresii kana to’achuuf jedhan Dr. Tedroos, wal ga’ii gurguddaa kan akka sadiyeemii fi manneen sirba halkanii ittisuu dhaan sagantaa qorannaa cimaa ta’e, namoota vaayiresii kanaan qabaman adda baasuu irratti hojjechuu qabu jedhan.
Biyyoonni namoota akkaan saaxilamoo ta’an maanguddoota dabalatee namoota dhibee hamaa qaban fi hojjettoota hojiitti bobba’uun dirqii ta’e vaayiresicha irraa ittisuuf tarkaanfii fudhachuu qabu, kunis lubbuu du’a oolchuuf ni gargaaraa caasaa eegumsa fayyaa isaanii irra ba’aa jirus ni salphisa jedhan.
Dr. Tedroos namoonni maaskii akka kaayyatan, wal irraa hiiqiinsa hawaasummaa akka kabajanii fi irra deddeebiin harka akka dhiqatan waamicha dabarsaniiru.
Talaalli COVID-19 sirriitti hojjetu oomishuuf dorgommii jiru ilaalchisees kan hoogganaan bulchiinsa nyaataa fi dawaa Yunaayitid Isteetis Dr. Stiiphen Haan dhaabi isaanii utuu yaaliin nama irratti ta’u sadarkaa dhumaa hin dhaqqabin talaallii yeroo hatattamaa dhiyeessuu mala jedhaniif illee jarmayaan fayyaa addunyaa of eeggannoon akka jiraatu beeksisee jira.
Hayyuun saayinsii gameettiin kan WHO Dr. Soumayaa Swamina-tan akka jedhanitti kan mirkanuun akkasii of eeggannoo akkaan cimaa dhaan ta’uu qaba. Waan akka salphaatti hojjetamu miti jedhan.
Addunyaa irraa uummanni miliyoonni 6 COVID-19n duraa kan qabamteef kanneen 183,585 duraa du’an Yunaayitid Isteetis deebii kenniteen uummanni dhibba irraa harki 67 talaallii kana ni fudhatu jette.
Vaayiresiin kun kutaalee US hedduu keessaa tasgabbaa’us kan akka Indiyaanaa, Iowa, Kansaas, Michigan, Minnesota, Mizuurii, Nebraaskaa, Ohio, Nort Dakotaa fi South Dakotaa keessaa guyyoota dhiyoo namoonni haaraa qabaman dabalaa adeemuu akeekkachiisaniiru.
Hanga kibxata har’aatti addunyaa irraa lakkoobsi namoota koronaan qabaman miliyoona 24.5 yoo ta’u kanneen 850,000 ta’an du’uu kan waa’ee vaayiresii kanaa hordofu Yuniversitiin Joons Hopkins beeksisee jira.
#Iyyaa Iyya dabarsaa: Harargee lixaa Aanaa xuulloo magaalaa..
የ ፒፒው 532 ምናባዊ ትምህርት ቤቶች!